China Quarzite Interior Decoration Natural Stone ngokwenene mveliso kunye nabenzi | I-DFL
Umzekelo No .: DFL-1308YHZPB (T)
Uhlobo: Isileyiti sendalo
Ubukhulu: 10 * 40cm
Umzekelo No .:I-DFL-1308YHZPB (T)
Unyango ngaphezulu: Umehlulelwano
Ubukhulu:10 * 36cm; 10 * 35cm
Iindidi zeMveliso: Iiphaneli zaMatye aBonakalayo> Ilitye eliBalaseleyo
Ukuhonjiswa kwangaphakathi kweQuarzite I-Natural Veneer yelityeinobuncwane bokuthungwa kunye nombala obongeza ukuqaqamba okungaphelelwa lixesha kuyo nayiphi na indawo yangaphakathi okanye yangaphandle. Ukuqinisekisa ukomelela kunye nokusebenza ngokuchaseneyo, iimveliso zamatye endalo zinokusetyenziselwa ukwenza ukujonga okuhlangeneyo kwesitayile esihlala sikho. DFLstoneIiphaneli zamatye zihambelane nezi mpawu zilandelayo:
Iikhathalo zomzimba Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Onke amatye okuhombisa amatye asemgangathweni aqinisekisiwe. Siyi-China Imveliso yeLitye leLitye leNdalo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Sinoxanduva kakhulu kuzo zonke iinkcukacha eku-odeni kwabathengi bethu nokuba kungakanani na kumgangatho wewaranti, amaxabiso anelisekile, ukuhanjiswa okukhawulezileyo, kunxibelelwano lwexesha, ukupakisha okunelisekileyo, imigaqo yentlawulo elula, eyona migaqo ilungileyo yokuhambisa, emva kwenkonzo yokuthengisa njlnjl. ukuthembeka kubathengi bethu bonke. Sisebenza nzima nabathengi bethu, abantu esisebenza nabo, abasebenzi ukwenza ikamva eliqaqambileyo.
I-Pink Quarzite yendalo eQokelelweyo yamatye
Iinkqubo zeNdalo zeLogo zeLiggerstone yoBume bendalo ...
Ngaphandle Kwodonga lweRusty Quarzite Ledgestone ...